Amakaag Iyo Yaab Tacadiga Sharci-Darada Ah Ee Wakaaladda Biyaha Hargeysa Ay Kula Kacdo Dadka Rayidka Ah by. Alla Yaqaan: Xuseen Barre Yuusuf
Thursday January 24, 2019 - 18:07:06 in Wararka by Super Admin
Wakaaladu waxay si indhalaanah iyo mamul xumaanah ugu dhaqaaqdy biyogalinta guryaha ee magalada Hargeysa . biyo galinta guryaha oo ahaanjirtay 5400,000sh, imigana ay toban labtay biyo galintii guryaha.
Markii aanbadhy waxaan hely qimayaash kala duwan ee hooskuqoran inlagugaliyo guryaha magacyadooda ee hoos kuqoran.
1: Guriga sandaqada ah biyo galinteedu waa 3000,000sh
2: Aqalka dhagaxa ah ee 4maqsin ah biyo galintiisu waa 6000,000sh
3: Aqalka dhagaxa ah ee filada ah biyo galintiisu waa 10,000,000sh
4: Aqalka fooqa ah biyo galintiisu waa 15000,000sh
Hadaba waxa iswaydiinle iyadoo aany biyojirin sida looga qadaayo lackta intaa leeg.Waxaa jira dadbadan oo aan awoodikarin lacagta farahabadan inay bixyaan unabahiyiin biyo in ay helaan. Miyaanu ogayn Maareeyah wakaalada biyuhu inay yiheen waxa uguhoreya ee biliaadmigo ubahanyahay oo aykamidyihiin nolol malmeed biliaadmigu aanu kamaarmikarin.
Markii aan waraystay dadbadan oo sixirbararka biyohu sameyay waxay egujawabeen waa dhkafaar iyo yaab.Mrakii aan waydiyay sixrbararka biya ah miyaanay dawladu waxkaqabankarin waxay iigu jawabeen meel loo cabasho tago ma jirto waxbana lagama qaban karo. Hadaba tani waayabka yaabkiis.
Hadaba waxa iswaydiinle wasaarad kastaaba ma’iyadaa shuruucdeeda samysata mise Baarlamaanka Somaliland ayaa sharciyada loo bandhigaa oo fuliya.
Hadii ay taasi jirto maxaa dadwaynaha waxloogu qaban waayay. Xafadkasta waxaa laga soo doortaa xidhibaan maxaa loosoo doortay maxayse tahay shaqadoodu. Waa su’aal loo baahan yahay in laga jawaabo. Jawaabtu waxa weeyi inay dalka iyo dadkooda u shaqeeyaan oo ay u doodaan dadkii soo doortay kolba. waxee sharciga dhaafsan oo ay kamid tahay wasarada biya ee hargesa sharcidarada biyo gelinta guryah ay kufulisay dadwanaha kunool magalada Hargesa.
Mudani madaxwayne Muse Bixi Cabdi ILAHAY waxu kudhibay Seef culus oo aykuqorantay Magaca ILAHAY waxana lagugudhibay inaad ufuliso sidiilagugudhibay ILAHAYNA wukulaqabanaya bi idnilaah.Wadankan magaranayo dadkisii inaydhamaadeen iyo inay meelkale kumaqanyhiin.Qofqudhi waxmaqabankaro ee ILAHAY hakulaqabto hawlaha culus ee kuhoryaal.
Alla Yaqaan: Xuseen Barre Yuusuf